Jaamacada Tampa GPA, Macluumaadka Ogolaanshaha SAT iyo ACT
Jaamacada Tampa GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Tampa GPA, SAT iyo ACT Graph
Jaamacada Tampa GPA, buundooyinka SAT iyo buundooyinka ACT ee loogu talagalay. Xogta macluumaadka Cappex.
Iyada oo la aqbalo heerka aqbalaadda 48%, Jaamacadda Tampa waxay leedahay oggolaansho dhexdhexaad ah. Ardayda ugu qalanjebisan badankood waxay leeyihiin dhibcaha imtixaanka iyo heerarka celceliska ama ka fiican. Si aad u aragto sida aad u cabbireyso, waxaad isticmaali kartaa qalabka bilaashka ah ee Cappex si aad u xisaabiso fursadahaaga aad ku heli karto.
Ka doodista Jaamicadaha Tampa ee Qaadashada Ogolaanshaha:
Fasalka kor ku xusan, darajooyinka buluuga iyo cagaaran waxay u taagan yihiin ardayda la aqbalo. Waxaad arki doontaa in ardayda badidooda la dhigey ay leeyihiin celceliska dugsiga sare ee "B" ama ka sareeya, iskudarka SAT ee ku saabsan 1000 ama ka sareeya (RW + M), iyo ACT isku dhafka 20 ama ka sareeya. Fursadahaaga ayaa ah kuwa ugu fiican ee dhibcahaaga iyo dhibcaha imtixaanku ka yaryihiin heerarkan hoose. Haddii aad tahay arday xoog leh, waxaad heli doontaa arday badan oo arday badan oo dhigta Jaamacada Tampa oo leh "A" celcelis ah.
Dhinaca dhexe ee garaafka waxaad arki doontaa dhibco cas oo casaan ah (ardayda la diiday) iyo dhibco hurdi (ardayda liiska suga) oo lagu qasi karo cagaar iyo buluug. Ardayda qaarkood ee u muuqda inay bartilmaameed u yihiin Jaamacadda Tampa lama dhigin. Qaar ka mid ah dhibcooyinka xogta ka muuqata waxay soo jeedinayaan in ka soo horjeeda ay sidoo kale run tahay - ardayda qaar ee leh darajooyinka iyo dhibcaha imtixaanka ka hooseeya heerka ayaa la dhigey. Sababtoo ah jaamacada Tampa ee kaqeyb galka ah waxay go'aan ka gaartaa xogta tirooyinka badan. Waxay rabaan inay arkaan in aad qaadatay koorsooyin dugsi sare oo adag oo kugu soo diyaariyay shaqada heer jaamacadeed ee maadooyinka muhiimka ah. AP, IB, Honors, iyo fasalada laba-is-qorista ayaa dhamaantood xoojin kara codsigaaga.
Haddii aad isticmaasho Arjiga Guud , Codsiga Isbahaysiga, ama UT codsigiisa, habka gelitaanka waa mid dhammaystiran . Jaamacadu waxay dooneysaa inay aragto qoraallo qeexan , oo ku lug leh waxqabadyada dheeraadka ah , iyo waraaqaha wanaagsan ee talada . Sidoo kale, ardayda codsanaysa muusikada, farshaxanka, ama masraxa ayaa u baahan doona in la baaro. Tababarada ciyaaraha fudud, waxbarashada, iyo barnaamijyada kalkaalinta ayaa sidoo kale leh shuruudo dheeraad ah.
UT waxay leedahay barnaamijka aan tooska ahayn ee waxqabadka hore . Jaamacadaha badankood, horay u codsan karaan waxay ku wanaajin karaan codsadayaasha la dhigo. Hawlgabka Hore wuxuu kaa caawinayaa muujinta dareenka dhabta ah ee jaamacada, waxana uu leeyahay faa'iido dheeraad ah oo ah helitaanka go'aanka oggolaanshaha ka hor wakhtiga codsadayaasha joogtada ah.
Si aad u ogaato wax badan oo ku saabsan Jaamacadda Tampa oo ay ku jiraan qalinjabinta qalin-jabinta dugsiga iyo dhigista, kharashka, gargaarka dhaqaalaha, iyo barnaamijyada tacliinta caan ah, hubso inaad hubiso jaamacadda Tampa ee ku-qorista macluumaadka . Waxaad arki kartaa qaar ka mid ah indha-indheynta dhismaha Jaamacadda Tampa Photo Tour .
Haddii aad rabto Jaamacadda Tampa, waxaad sidoo kale u egtahay sida dugsiyadan
Jaamacadda Tampa ee xooga badan ayaa ka heshay liistada kulliyadaha sare ee jaamacadaha Florida iyo jaamacadaha iyo kulliyadaha koonfur-koonfur-dhexe iyo jaamacadaha . Jaamacadaha gaarka loo leeyahay oo daneynaya codsadayaasha, Jaamacadda Miami waa kuwa ugu caansan. Dhanka dadweynaha, codsadayaasha Jaamacadda Tampa waxay inta badan ka dalbadaan Jaamacada South Florida , Jaamacadda Central Florida , iyo Jaamacada Atlantic Florida . Haya'daha dawladdu waxay si cad u leeyihiin qiime ka qiimo jaban oo ka baxsan hay'ad gaar ah sida Jaamacadda Tampa, laakiin ardayda u qalma caawimaadda dhaqaale, kharashka dhabta ah ma noqon karo wax kasta oo ka duwan.
Michigan Tech GPA, SAT iyo ACT Data
Grove City College GPA, Macluumaadka SAT iyo ACT
Jaamacadda Maine ee Farmington GPA, SAT iyo ACT Data
Morehouse College GPA, SAT iyo ACT Data
Harvey Mudd College GPA, SAT iyo ACT Data
Elon GPA, SAT iyo ACT Data
Macalinka Sweet Briar College GPA, SAT iyo ACT Data
CUNY College College GPA, SAT iyo ACT Data
Ball State GPA, SAT iyo ACT Data
Jaamacadda Gobolka Murray GPA, SAT iyo ACT Data
MIT GPA, SAT iyo ACT Data
UNC Chapel Hill Tirakoobka Aqoonsiga iyo Heerarka
Cuánto gana un ma gartey Estados Unidos en cada uno de estados
Mucjisada bogsiinta Maryjo
Tilmaamaha jirka ee haweenka: Isticmaalidda jidh-dhiska si aad u lumiso Fat iyo Tone Up
Aasaasida Xisbiga Jamhuuriga
5 ra'iisul wasaaraha dib u habeynta socdaalka Trump ya quiénes afectaría
Amarrada Nabadda ee Maskaxda
Talooyin muhiim ah oo loogu talagalay waalidiinta ka yimid maamulaha
Mashruuca Foostada Guriga
Saddex xagalka dahabka ah
Garoonka Kubadda Dahabka iyo Iskudhafka Caasimada
Taariikhda macmacaanka qoyan ee jiilaalka
Raadi Maxay MILF Acronym Means
Muuqaal isbarbardhig ah
Tilmaamo lagu soo dejinayo iyo rakibidda Visual C # 2008 Express Edition
Jaamacadda Christopher Newport Admissions
Minor Triad Chords ee Piano
Haweenka iyo Dagaalkii Dunida II - Haweenka Shaqada ah
Quotes gaaban oo ku saabsan nolosha
Xirfadaha Biyaha ee Furan ee Miisaanka Dhabarka ah
5 Haweenka ugu Fududeeyayaasha ah ee Badbaadiya ee Dhammaan Waqtiga
9 waa in ay ahaato mid aad uwanaagsan oo ka mid ah EEUU con visa de turista
Qeybaha daabacaadda Hadalka
Sida loo horumariyo loona abaabulo Qeybin Qormo
Macuilxochitl: Macuilxochitl, God of khamaar ee Aztec Diinta, Mythology
Qodobo looga soo horjeedo dilka loo geystay